In ka badan la soo dhaafay 10 sano, malaayiin ayaa is tusay sida ay faa'iido u tahay in tareenka a! beeraha Rich ee Ereyada, Xeebaha dhalaalaya, iyo buurta daahirka ah Qoryaale weligood laguma sheegin buug-yaraha safarka ama baloogyada. Qaadashada tareenka waa madadaalo ah, ku habboon, iyo habka jeebka-saaxiibtinimada leh ee laga helo barta A ilaa dhibic B, si aadan u malayn in laba jeer, tareenka!
Waxa labaad ee weyn ee ku saabsan tareenada Yurub iyo guud ahaan waa sida miisaaniyad-saaxiibtinimo ay u noqon karaan. Ma aha oo kaliya waa waxaa aad u badan meelaha cheap uu ka soo xusho, laakiin sidoo kale siyaabo xad-dhaaf ah si ay u dhinto hoos on kharashka safarka guud. Sidaas darteed haddii aad yartay in la garaaco mararka tareenka ugu dhakhsaha badan, halkan waa tabo weyn yar in ay isticmaalaan:
Haddii aad tahay arday jecel safarka ama socotada caadiga ah ee maalin walba tareenka raaca, hurdada on tareen kara jari karaa lacagta ku bixisay on hoy ku dhawaad ​​qeybtii. Waxaa sidoo kale hab cajiib ah si loo badbaadiyo waqtiga sida aad hurdo la dhaco oo isku magaalo degganaa oo toos kale. Isagoo sheegay in, waxaa muhiim ah in la fahmo noocyada kala duwan ee waafajin tareen habeenkii.
Xirxiraan cunto adiga kuu gaar ah waa by ilaa hadda habka ugu raqiisan si ay u tagaan oo ku saabsan. Ka duwan safarada joogtada ah bas ama gaari, marka aad qaadato tareen aad dhab ahaantii si raaxo leh ku cuni kartaa. kuraasta badankoodu waxay leeyihiin miiska ay kasoo baxeen ama miis go'an u dhaxaysa laba kursi. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay si aad iibsadaan cuntada iyo cabitaanka inta aad safarka, waa caadi. cuntada A on tareenka ma aha haday SLT oo aad inta badan ka codsan kartaa kaararka in la siiyo qiimo dhimis.
Qaadataa in Tareenku A si ay u Save-A-tareenka, dooro meeshaad u socoto, oo tareenka u raac ficil ahaan meel kasta oo ka mid ah Yurub qiimaha ugu jaban ee suuqa! Oo, maleynayaa in waxa? Marka aad hesho tigidh tareen aad la Save A tareenka, nidaamka jaale lagu sameeyo gudahood 3 daqiiqo, sidaas darteed alaabahooda bacaha aad oo wuxuu ku raaxaysan wax kasta oo soo socota!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftake-train-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#riyo habeen #traveleurope Talooyin safarka tareenka traveltips